पर्दाभित्र | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 06/19/2010 - 15:24
के भो ? के भो ?....
क ः देखे देखुन् । मलाई के मतलब ? मैले झन् रिहर्सलमा सबै मिलेर नाटक गर्नुपर्छ । झगडा गर्नु हुँदैन, मलाई जुन रोल दिए पनि हुन्छ भनेर, सबैभन्दा सानो रोल लिएँ । मेरो त डायलग पनि धेरै छैन । लौ भइगो भनेर.....
यो नाटक, प्राचीनकालको नाटक हो । हिरण्यकशिपु नामको एक राक्षस राजा सारा विश्वमा आफ्नो राज जमाउन चाहन्थे..........प्रल्हाद भने उनको त्यो.......
उद्घोषकः (डायरी हेर्दै पढ्दै) यो नाटकमा प्रल्हाद आफ्नो महìवाकांक्षी पिता हिरण्यकशिपुका हरेक सजाय सहर्ष स्वीकार गर्छन् तर.......
कः यो लुगा लगाउँदैमा के हुन्छ ? मैले अरू के नै मागेको छु ! नाटकको मूलभूत रोल तिमीहरूले लिँदा मैले केही बोलेँ ? मलाई पनि त प्रल्हाद, हिरण्यकशिपु जस्तो मुख्य रोल खेल्न मन लागेको थियो, तर लौ भैगो, साथीहरू हो, मैले लोभ गर्न हुँदैन भनेर केही बोलिन । अहिले यो प्रल्हादको ड्रेस राम्रो लागेर म लगाउँछु भन्दा तिमीहरू सबै.............
ग ः यही नाटकमा म रोध-नामक पात्रको भूमिकामा छु । हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरा प्रल्हादलाई आगोमा जलाउन लाग्दा म रोधले प्रल्हादको त्यो लुगा लगाएर प्रल्हाद जस्तो बन्दै आगोमा जल्ने प्रण गरेको छु । मलाई साँच्चीको प्रल्हाद ठानेर जलाइन्छ । रोधले आफू मरे पनि प्रल्हाद मर्नु हुँदैन किन भन्यो थाहा छ । किन भने प्रल्हाद सत्यको पक्षमा छ.........साथीका लागि उसले त्यत्रो बलिदान गर्‍यो.....तर हामी ? हामी भने एउटा लुगाका लागि .........छि.......।
क ः (भावुक हुँदै) सरी, सरी, मित्र हो, मलाई माफ गर । मसँग यही एउटा रिस र अहँ थियो, आजदेखि त्यो रहँदैन म पनि प्रल्हाद झैँ सत्यवादी बन्ने प्रयत्न गर्नेछु । सरी....सरी....... ।
उद्घोषकः ल, अब सबैको 'मुड अन' । ल, सबै भित्र जाऊ, आ-आफ्नो लुगा लगाई तयार होऊ, अब नाटक सुरु गर्नुपर्छ ।
यो नाटक हिरण्यकशिपु र प्रल्हादको......(उनको आवाज मधुरो हुँदै जान्छ, सङ्गीतको धूनले आवाज होसिन्छ ।)
लौ, अब सुरु हुन्छ, यो नाटक........